Kedu ka itinye aka na-arụ ọrụ
Ntinye ihe na-ekpo ọkụ bụ usoro nkwadebe ọkụ na-ekpo ọkụ. Ala a na-ebute ike nke gbanwere n'ime okpomọkụ na kọntaktị na ihe ndị na-eduzi dị ka nchara. A na-eme ka okpomoku dị n'okpuru mkpuchi ahụ, na-eme ka mkpuchi ahụ kpoo ngwa ngwa. Usoro a dabara adaba maka ịgwọ ebe dị larịị ma ọ bụ nke gbagọrọ agbagọ na saịtị ahụ ọ chọghịkwa mkpọchi.
Usoro ntinye a ga - ewepu agba, mkpuchi ndị ọzọ, nchara nchara, nje na nje na mmanụ griiz na - eduzi mmekọrịta dị n'etiti ihe na mkpụrụ osisi etch, ntinye ọkụ na - achịkwa nke na - ewe obere ume.
Itinye n'ọkwa mkpuchi Machine & Sistemụ Agba Agba Agba & RPR itinye n'ọkwa System
Categories Technologies Tags kpo oku mkpuchi mwepu mkpuchi, ntinye mkpuchi, itinye n'ọkwa kpo oku, induction agba mwepụ, induction agba agba, itinye usoro PRP, itinye n'ọkwa usoro RPR, nchara mwepu induction, nchara okpu, itinye n'ọkwa, itinye n'ọkwa usoro ntinye, Naa Mail igodo